Nezvedu - Zhenjiang Kingway Optical Co., Ltd.
Isu tinovimba mhando uye sevhisi mhando inogona kuwedzera yedu chigadzirwa kukosha.
Zhenjiang Kingway Optical Kambani inofungidzirwa mukugadzirwa kweCR39,1.56,1.61index lenses, 1.67 yakakwira index lenses uye bifocal lenses, inofambira mberi lenzi uye polycarbonate lenses Iyo kambani yakagadzirawo akateedzana e1. Ese lenzi anogona kugadzirwa mune akapedza uye semi-apera.
Iyo kambani zvakare supllies RX lens, chigadzirwa chitsva chakakurumbira cheiyo Optical indasitiri nekuda kwekuda kukuru kwekugadziriswa dhizaini. Isu zvakare tinogadzira achromatopsia lens (kupofara kwemavara) uye mutyairi-dziviriro lens.
Magirazi edu uye mafuremu ari kutengeswa pasirese uye ane mukurumbira mukurumbira mumisika yawo yese yekukunze.